Xukumadda oo ka welwelsan Go'aankii ay ka qaadan laheed kenya ka dib Diyaaradahii Tegay Kismaayo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Xukumadda oo ka welwelsan Go’aankii ay ka qaadan laheed kenya ka dib...
Xukumadda oo ka welwelsan Go’aankii ay ka qaadan laheed kenya ka dib Diyaaradahii Tegay Kismaayo
Qoraal xalay kasoo baxay Hay’ada Duulista Hawada ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay duulimaad kasta oo ka yimaada dhinaca dalka Kenya in ay si toos ah uga degaan magaalada Kismaayo.
Diyaaradaha kasoo duula dalka Kenya ee doonaya in ay tagaan magaalada Kismaayo ayaa lagu amray in ay soo maraan magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kahor inta aysan Kismaayo ka degin.
Waxaa maanta magaalada Kismaayo ka degtay diyaarad si toos ah uga soo duushay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, diyaaradan ayaana waday wafdi ka socday dowlada Kenya oo ka qeyb galaya caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaan la ogeyn talaabada ay qaadi doonto maadaama markii labaad dowlada Kenya jabisay xayiraad dhinaca socdaalka ah ay dowlada federaalka kusoo rogtay diyaaradaha taga Kismaayo.
Hay’adda Duulista hawada Soomaaliya ayaa horey dacwad ka dhan ah dowlada Kenya u gudbisay hay’adda maamulka Hawada u qaabilsan Qaramada Midoobey ee ICAO, kadib diyaarad Kenya kasoo duushay oo jabisay xayiraadii saarneyd Kismaayo
Previous articleDeg Deg: Ahlusunna oo kasoo horjeesatay Guddiga maamul u dhisidda Dowlad Goboleedka Galmudug (Warsaxaafadeed)
Next article(Daawo) Aadan Barre oo sheegay in Jubbaland Xariir Gaar ah ay la leedahay Kenya